Ntorobịa Naịjirịa amaala Buhari aka maka ịkpọ ha 'ndị umengwụ' - BBC News Ìgbò
Ntorobịa Naịjirịa amaala Buhari aka maka ịkpọ ha 'ndị umengwụ'
20 Eprel 2018
Nkenke aha onyonyo Ndị Naịjirịa na-ekwu na onyeisiala Muhammadu Buhari na-awụ ha n'ala na mba ofesi oge ụfọdụ
Ndị mmadụ ka na-etinye ọnụ n'okwu gbasara 'umengwụ' onyeisiala Naịjirịa kpọrọ ndị ntorobịa.
Ka Buhari gara London maka nzukọ ndị ọchịchị mba ndị nọ n'okpuru Commonwealth nke a kpọrọ CHOGM, o kwuru na ndị ntorobịa Naịjirịa dị umengwụ.
Okwu a o kwuru atọghị ọtụtụ ndị Naịjirịa ọchị, nke kpatara ha jiri gosi iwe ha n'elu sosha midia.
Onyeisiala agaghị akọli ụmụ Naịjirịa ọnụ
Onye na-ekwuchitere ọnụ Buhari bụ Femi Adesina, kwuru na ndị Naịjirịa ghọtaghiere ihe o kwuru.
Image Copyright Femi Adesina Femi Adesina
Ihe Adesina kwuru akwụsịghị ndị mmadụ ikwu ihe dị ha n'obi.
Ọtụtụ n'ime ha gara n'ihu bido igosipụta ọrụ aka ha, ma na-ekwu na ha abụghị ndị umengwụ n'agbanyeghị na ala Naịjirịa adịchaghị mma.
Skip Twitter post by @JennyGISTers
— JennyGist (@JennyGISTers) 19 Eprel 2018
End of Twitter post by @JennyGISTers
Otu onye ọcha tinyere ọnụ ya n'okwu a.
Skip Twitter post by @UlrichJvV
— Ulrich Janse van Vuuren (@UlrichJvV) 19 Eprel 2018
End of Twitter post by @UlrichJvV
Ụfọdụ kwuru etu ha si jiri aka ha zụọ onwe ha n'ụlọakwụkwọ site na mbọ ha na-agba.
Skip Twitter post by @IgboHistoFacts
— IGBO Facts & History (@IgboHistoFacts) 20 Eprel 2018
End of Twitter post by @IgboHistoFacts
Ụfọdụ kwuru na ha agaghị ebinyere Buhari aka n'afọ 2019
Skip Twitter post by @tstickstobi
I have forgiven the @NGRPresident Buhari for the erroneous statement #LazyNigerianYouths he made yesterday... but if you are a sensible youth really and vote a 75 years old man in 2019 that means you are mentally and spiritually lazy! @Gidi_Traffic
— Tobi Adekunle (The Analyst) (@tstickstobi) 20 Eprel 2018
End of Twitter post by @tstickstobi
Otu onye ji okwu njakịrị gosi onye nwere ọrụsị ka na-eji ya arụ ọrụ
Skip Twitter post by @DirectorSolomon
Look at all these #LazyNigerianYouths who are depended @MBuhari oil money... Mtcheeeew pic.twitter.com/EagThuSCz9
— FILMMAKER🇳🇬🐐 (@DirectorSolomon) 19 Eprel 2018
End of Twitter post by @DirectorSolomon
Onyeisiala agaghị akọli ụmụntorobịa Naịjirịa niile ọnụ
Omenaala Umudim bukọtara obodo 14 dị n'ime ya
Lai Mohammed agọrọla aka ya n'okwu banyere asụsụ Buhari
Ọ dịla anya akpachiri ọbaego Peter Obi - Ike Abonyi